Golfové hřiště Igumbi leGaloli ye-Golf Semily - Umculo wamahhala kunye nokulandelwa kwemidiya yevidiyo zakho ze-YouTube okanye iiprojekthi ze-multimedia
ikhayaCzech kwiParadesiI-Golf Course Golf Club Semily
I-Golf Course Golf Club Semily	Ushiye uluvo
Inkambo yeGalofu IQela leGalofu ye-Golf Semily ukusuka ekuphakameni kwe-14.04.2018. I-Semily Golf Course ifumaneka kumlambo weMfula Jizera ukususela kwi-1970. I-Semil ejikelezayo ngummandla weentlambo ezinzulu kunye ne-canyon yoMlambo waseJizzera kunye neentlanzi zayo kunye ne-Oleška, iJílovecký ne-Chuchelský imilambo, iKamenice neVosmenda.
Romance Jizera River Valley kunyuswa Trail Rieger, nto leyo features asibhozo gallery, amathuba kunye nemithombo yamanzi. Le canyon yaseJizzera yasetyenziselwa ukugcinwa kwemvelo kwi-1951. Kuyinto ummandla izimvo ezikude mlilo yamandulo Kozákov kunye amazing ukuqwalaselwa metal nenqaba yayo ungabona kuyo ngosuku zada zafikelela ikota eBohemia kunye zizibonakude ukuba ukubamba akrotyiswe isakhiwo emide Prague. It engama i Czech Central Mountains, iintaba Lusetian, Ještědský Ridge Jizerské Mountains, iiKrkonoše, Broumov Highlands, Orlické kunye ezintabeni.
Ekupheleni konyaka, i-1997 yaqalisa i-grilles emibini esandul 'ukutshayela kwakhona eyayivumela i-Golf Club Semily ukuba iququzelele umqhubi wokuqala wembambano kwimbali yayo ethi Ingeo Cup'97. Ngexesha le-1998, indawo yokudlala yaseSmilan yenze ezinye iinguqu ezincinane. I-grenadier entsha uJedničky yaqalisa ukusebenza kwaye igridi yoqeqesho entsha yahlanganiswa, eyaphucula umgangatho kunye nobunzima bebala lokudlala.
← Umlambo wamanzi kwiReervoir Reservoir
I-Windows 10 Spring Update Creators Downloads →